Espaina: “Tsy Fankatoavana Ara-Pahasalamana” Noho Ny Fepetran’ny Fitsitsiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2012 4:28 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, македонски, Deutsch, Español
Nanangana sehatra entina hanoherana ny fanavaozana ara-pahasalamana natao vao haingana ny vondrona tsy miankin'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny mpandray anjara amin'ny hopitalim-panjakana. Nomena anarana hoe”Eny hoy aho ho an'ny fahasalaman'ny daholobe” (@Yosisanidaduniv) [es] ny hetsika ary ny foto-kevi-dehibe ijoroany dia ny “tsy fanekena” sy ny fanoherana ny Lalàna 16/2012 novolavolain'ny governemanta noho ny fepetra henjana momba ny fitsitsiana [miteraka] /sy/ ny hetsi-panoherana sosialy [mg].
Manomboka manankery ny volavolan-dalàna amin'ny 1 Septembra 2012, araka ny filazan'ny Minisitry ny Fahasalamana, ny tanjona amin'izany dia ny “hahatonga izany lalàna izany ho lalàna manerantany”, ary araka ny fanambaran'ny governemanta ao amin'ny antokom-bahoaka: dingana mankany amin'ny “tena lalàna manerantany” sy ny “fampitsaharana ny fandaniam-poana izany“.
Fahasalamana toy ny bizina
Na dia izany aza, mihevitra ireo mpitsikera fa mety hanova ny rafi-pahasalamana sy hampisy fiantoham-pahasalamana vaovao ny volavolan-dalàna izay mahatonga tsy fanomezana kara-piantohana ara-tsosialy ho an'ireo olona manodidina ny150.000; rafitra manavaka ny olona voaaro sy ny tsy voaaro ara-pahasalamana izany. Fanampin'izany, mety hampiato tanteraka ny rafi-pahasalamana sahaza ho an'ny rehetra izay mbola manankery eo Espaina hatramin'izao izany :
Toy izao manaraka izao ny fandraisan'ny pejy tranokalan’ ny Eny ho an'ny fahasalaman'ny daholobe:
Ny zava-dratsy momba ity fanovana ny rafi-pahasalamana ity dia ny mety handalovany amin'ny rafitra iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona, mifototra amin'ny hasina toy ny firaisankina sosialy(“Afa-mitokona aho,” “Mety harary aho kanefa tsy mitokona,” “Androany izaho, rahampitso ianao) sy ny rariny ara-tsosialy (“Zon'ny tsirairay ny hianatra sy hahazo fahasalamana,” “Miantoka ny zon'ny tsirairay no làlana tsara hananganana fiarahamonina vanona”) ao anatin'ny rafitra ahazoan'ny olona tambiny amin'izay handoavany vola, ary tokony hamarinina ny maha “olona afaka mahazo fitsaboana” azy, na manana antoka ara-pahasalamana miaro azy raha sendra marary na mila fitsaboana. Mibaribary ny fihemoran'ireo zon'olombelona, kanefa tsy ahafahany manangana tahiry akory ny fepetra.
Nanazava i Patricia (anarana nosafidiana), mpikambana ao amin'ny hetsika manohitra ny volavolan-dalàna fa hiteraka rafitra “tahaka ny tao Amerika Avaratra, izay nanjary fitadiavam-bola -bizina- eo amin'ny fahasalamana.”
‘Eny hoy aho amin'ny fahasalamana faobe’
Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny famerana ny fahazoana kara-pahasalamana. Noho ilay volavolan-dalàna anefa dia nesorina ireo olona tsy manana taratasy toy ny olona maherin'ny 26 taona izay mbola tsy nisoratra anarana mihitsy taminà Fiarovana Ara-tsosialy. Fanampin'izany ihany koa ny fanesorana ny zo toy ny fandoavana mialoha ny saran'ny fitsaboana na ireo tombotsoa hafa maimaim-poana (toy ny protezy (prothèses).
Na dia voakasiky ny fanovana aza ireo olona marobe, indrindra fa ireo tsy manana taratasy no mety ho voakasika voalohany, izay tsy ahazo fiarovana ara-tsosialy manomboka amin'ny 1 Septambra. Naneho hevitra ny mpisera Twitter mikasika ny fangalan'ny governemanta 700 euro (mihoatra noho ny saram-piantoahana ara-pahasalamana) isan-taona amin'ireo olona tsy manana taratasy, fanapahan-kevitra izay nolavin'ny be sy ny maro.
Araka ny nambaran'i Patricia, tsy hoe tsy araka ny lalampanorenana ihany ilay volavolan-dalàna fa sady tsy rariny ihany koa, izany indrindra no anton'izao fanoherana faobe izao. Tsy mitsaha-mitombo ny fahatezeram-bahoaka, indrindra fa omen'ny governemanta vahana ny toeram-pitsaboana tsy miankina raha oharina amin'ny toera-pitsaboana an'ny fanjakana.
Namoaka lahatsary misy ny fanambaran'ireo olona voakasiky ny volavolan-dalàna ny tranokala pejy Facebook, hita amin'izany ny fandefasana hafatra hoe ” manan-jo ho salama isika rehetra”.
Torolalana raha hanao asa tsy fankatoavana
Fantatra fa zo “ekena fa tsy voarafitra loatra ho lalàna aza” ny fanoheran'ny fahatsiarovan-tena (conscience),ary ankatoavin'ny Zon'olombelona ny zo hanana fahasalamana, mikasa hanangana tambazotram-pitsikerana momba ny sehatry ny fahasalamana ny ao amin'ny tranokala aterineto. Araka izany, nanolotra modely isan-karazany momba ny fanoheran'ny fahatsiarovan-tena maromaro natokana ho an'ny mpampianatra, ny infirmiera, ary ny mpiasan'ny fahasalamana ity sehatra ity ary natolony koa ny ny antontan-kevitra momba izay lazain'ny lalàna isan-karazany.
Ny hevitra tohanan'izy ireo dia tokony hisy fiaraha-miasa eo amin'ny mpiasan'ny fahalasamana sy ny fanjakana, ary tokony hitaky izany ihany koa ireo mpanjifa tsy manana kara-pahasalamana, ary raha lavin'izy ireo tsy omena izany, dia “tokony hisisika hatrany izy ireo”. Mampahafantatra momba ny fahasarotana sy ny olana mety hitranga hatrehin'ireo mpanohitra koa izy ireo.
Amin'izao fotoana izao, dokotera eo amin'ny 1,000 eo no nanohana ny fanatanterahana ny fanoheran'ny fahatsiarovantena ary manohy manampy ireo mpifindra monina tsy manana antonta-taratasy. Nandritra izany, norahonan'ny Minisitry ny Fahasalamana izy ireo fa hosaziana raha mbola mitsabo ireo olona tsy manana antonta-taratasy: vaky ny ady eo amin'ny sehatry ny fahalasamana.